Nesorin'i Beijing ny tanànan'i New York ho renivohitr'izao tontolo izao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Nesorin'i Beijing ny tanànan'i New York ho renivohitr'izao tontolo izao
Ny mpanankarena be indrindra manerantany dia nanjary nanankarena tamin'ny taon-dasa na eo aza ny fihenan'ny COVID-19 sy ny toe-karena
Ny renivohitra sinoa dia lasa ivon-tapitrisany vaovao
Nahazo miliardera vaovao 33 i Beijing tamin'ny taona 2020, ary nahatratra 100 ny totaliny
Tanàn-dehibe sinoa dimy no isan'ireo 10 voalohany manerantany miaraka amina miliardera betsaka indrindra
Araka ny lisitra Forbes isan-taona an'ny Millionaires an'ny taona 2021, dia vao voalohany i Beijing no lasa foiben'ny miliardera manerantany.
Ny renivohitr'i Shina dia nahazo miliardera vaovao 33 tamin'ny taona 2020, nahatratra 100 ny isany. Tao anatin'izany no nandresen'i Beijing an'i New York City fa i Big Apple dia nanangana miliardera vaovao vaovao fito ihany tao anatin'ny fe-potoana mitovy ary nahatratra 99 miliardaire mponina tamin'ny 2020.
"Niverina haingana i Shina tamin'ny alalàn'ny areti-mandringana, nisondrotra tamin'ny isa 4 ka hatramin'ny laharana 1 ao amin'ny lisitra fanao isan-taona," hoy i Forbes.
Amin'ny ankapobeny, tanàna sinoa dimy no laharana eo amin'ny 10 voalohany manerantany miaraka amina miliardera betsaka indrindra. Hong Kong teo amin'ny laharana fahatelo niaraka tamin'ny 80 miliardera, i Shenzhen tamin'ny fahadimy tamin'ny 68, ary i Shanghai tamin'ny toerana fahenina tamin'ny 64. Nanampy 21 miliardera i Hangzhou, ampy hahatratra an'i Singapore ho an'ny laharana faha-10.
Ny renivohitra UK, London, nanisa mponina fito tapitrisa hafa koa, na dia nilatsaka tamin'ny laharana fahadimy ho amin'ny fahafito aza izy io ho "trano malaza indrindra amin'ny fananana olona folo." Tamin'ny famaranana ny 10 voalohany, nilatsaka avy eo amin'ny laharana fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra i Moskoa, raha i Mumbai sy i San Francisco - izay misy trano 48 miliaraire - mifatotra amin'ny laharana faha-8.
Araka ny tatitra, ny olom-baovao mpanankarena ao Beijing dia Wang Ning, 34 taona, izay nanjary nalaza tany Hong Kong tamin'ny volana desambra 2020 ny orinasan-tsarimihetsika malaza Pop Mart. mitentina 35.6 miliara dolara. ”
Ny mpanankarena be indrindra manerantany dia nanjary nanankarena tamin'ny taon-dasa na dia teo aza ny fihenan'ny COVID-19 sy ny toekarena, hoy i Forbes. Maneran-tany dia olona 660 no lasa miliardera vaovao, nahatratra 2,755 miliardaire manerantany, mitentina 13.1 tapitrisa tapitrisa dolara.
Jamaika amin'ny faran'ny herinandro paska: fitomboan'ny isan'ny tonga